पुरुषहरु मा कमेड | स्टाइलिश पुरुषहरू
पुरुषहरु मा फिर्ता कंघी अर्को संस्करण हो जुन ती सबैको लागि बाहिर देखिन्छ जो आफ्नो लामो कपाल लाईइट गर्न चाहान्छन्। यो केश लामो समयको लागि लगाइएको छ र हामी हातमा एक ब्रीफकेस र निर्दोष कपाल पहिरनको साथ विशिष्ट कार्यकारी सम्झन सक्छौं। धेरै गममा आधारित।
यदि हामी कंघी पछाडि केहि चीजको कदर गर्न सक्छौं भने यो हो हरेक वर्ष यो आफैलाई पुन: स्थापित गर्दछ, यद्यपि हामीले फेरि सामान्य देख्यौं क्लासिक हेयरस्टाइल त्यो सधैं तिनीहरूको छाप छोडेको छ। र एक प्रवृत्ति ब्रान्डको रूपमा यो सबै शैलीहरू, दुबै लगाउन सकिन्छ सुरुचिपूर्ण कपडा वा पोशाकको साथ।
टाइम्स पहिले यो केश सधैं बाहिर को लागी बाहिर छ उच्च वर्ग संग सम्बन्धित हुन वा राम्रो बानी भएका व्यक्तिहरूसँग, तर आज तपाईं यो कपाल लगाउन सक्नुहुन्छ र पहिलेभन्दा राम्रो देखिन सक्नुहुन्छ। अन्डरकट कपाल धेरै फैशनेबल छ र अनुहारको सबै कोणहरू बढाउन बनाउँदछ।
1 केश शैली फिर्ता
2 कसरी यो केश flawlessly प्राप्त गर्न?
2.1 कम्पास पम्प्याडोर वा भोल्यूमको साथ पछि तानियो
2.2 कसरी आफ्नो कपाल फिर्ता चाट्न
केश शैली फिर्ता
त्यहाँ धेरै संस्करणहरू छन् जुन यो हेयरस्टाइलको साथ बनाउन सकिन्छ। जुन सबैभन्दा फेसनबल छ त्यो हो कपाल अन्डरकट, जहाँ पूर्ण मुंडा भाग टाउकोको पट्टि र छोडिन्छ शीर्ष मा कपाल को एक धेरै। उसको पहिरनको तरिका एकदम क्रान्तिकारी थियो किनकि ऊ तल्लो वर्ग र सडक गिरोहको समूहसँग सम्बन्धित थियो। यो त्यो निर्दोष काटिएको-ब्याक कपालबाट बाहिर आउँदछ जुन रणनीतिक तवरले यसलाई दिनभर निर्दोष राख्नको लागि स्टाइल गरिएको छ।
लहरी वा घुमाउरो कपालको लागि हामीसँग छ एक साधारण pompadour को साथ फिर्ता कंघी, एक साधारण कटौती जहाँ यसको पक्षहरु लाई कम गरिएको छैन। तपाईंको फिक्सिंगको तरिकाaसँग हुन सक्छ जेल एक म्याट प्रभाव संग वा धेरै प्रतिरोधी waxes को साथ।
लामो कपाल संग धेरै पुरुष पनि मा शर्त कपाल पूर्ण रूपमा काटियो र फिर्ता काटियो। तिनीहरू प्रामाणिक ग्यालेन्टहरू जस्तै देखिन्छन्, ती मध्येका हलिउड कलाकारहरूले व्यक्त गरेका व्यक्तिको २० औं दशकमा सब भन्दा बढि ठूलो भूमिका खेल्दै। यसको फिक्सेशनको लागि अतिरिक्त कडा जेल तपाईंको उत्तम सहयोगी हो।
कसरी यो केश flawlessly प्राप्त गर्न?
यस केश प्राप्त गर्न त्यहाँ धेरै रहस्यहरू छैनन्, तर साना विवरणहरू लुकाउन सकिन्छ जसले राम्रो परिणाम समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। यो प्रभाव अधिक प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न, यो पूरै सफा कपालको साथ गर्नु राम्रो हुन्छ, जुन अघिल्लो दिनबाट कुनै पनि उत्पादनको ट्रेस हुँदैन।
कम्पास पम्प्याडोर वा भोल्यूमको साथ पछि तानियो
ताजा धोइएको कपालको साथ तपाईलाई चाहिन्छ हल्का रूपमा आफ्नो कपाल सुक्खा र यो सुक्खा हावाको लागि प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। तपाईं एक लागू गर्न सक्नुहुन्छ कन्डिशनर हाइड्रेसन पुन: स्थापना गर्न। सायद तपाईको विचार यो हरेक दिन धुनु हो र यसले कार्यले कपाललाई सुक्खा बनाउँदछ, त्यसैले कन्डिसनरले त्यो उपस्थिति फिर्ता लिन सक्दछ र अधिक नरमता दिन सक्छ।
जब तपाईं आफ्नो कपाल फिर्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईंले छनौट गर्नुभएको उत्पादसँग यसलाई ठीक गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई लागू गर्न सकिने रकम थाहा छैन भने, तपाईं धेरै थोरै उत्पाद थपेर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ र थोरै मात्र चाहिने सबै थोक थप्ने प्रयास गर्नुहोस् परिमाण भन्दा बढि बिना।
यदि तपाईको कपाल छाल छ भने तपाईले यसलाई पहिले नै लागू गरिएको फिक्सिंग उत्पादनसँग राख्न सक्नुहुनेछ एक ठूलो दाँत कंघीको साथयसले कपाललाई कपाल बनाउन धेरै मद्दत पुर्‍याउँछ अर्को प्रदर्शन जुन तपाइँ प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाई स्टाइल गर्न चाहानु भएको कपालको भोल्युम प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्दछ र तपाईले त्यसलाई पाउनुहुन्न किनभने यो धेरै सिधा छ: यसको लागि केश विपरित दिशामा गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्, यस दिशामा जोड दिनुहोस् र त्यसपछि तपाईंले चाहानु भएको छेउमा यसलाई कंघी गर्नुहोस्, यस तरिकामा यसले पहिल्यै भोल्युममा लिइसकेको हुनेछ।
कसरी आफ्नो कपाल फिर्ता चाट्न
यो केश तपाईको लामो कपाल भएमा उत्तम कार्य गर्दछ। कपाल फिक्सेशन अवशेष र सफा हुनुपर्छ %०% आर्द्रताका साथ। तपाईंले यसलाई कंघी गर्नुपर्नेछ र सम्भव जर्कहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुहोस् कपाल छ हामी यसलाई स्थिर रहन चाहान्छौं र सम्बन्धित फिक्सिंग उत्पादन प्रयोग गर्नका लागि हामी यसलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछौं।
एक सुरक्षित निर्धारणको लागि, उत्तम विकल्प हो एक ग्लोस वा म्याट फिनिशको साथ अतिरिक्त मजबूत जेल प्रयोग गर्नुहोस्। त्यहाँ पुरुषहरू छन् जुन दुई उत्पादनहरू मिश्रण गर्न रुचाउँदछन्, सेटिंग जेल सँगसँगै बलियो होल्ड स्टाइलिंग पेस्ट।
उत्पादन थोरै रकमको साथ सुरू गरी लागू गरियो र बिस्तारै कपाललाई चाहिने अनुसार थप्नुहोस्। यो सुझावहरूको साथ सुरू गरेर लागू गर्न सकिन्छ, यो जराबाट लागू गर्न आवश्यक छैन र हातको औंलाहरूले हामी जेललाई कंघी गर्दा फैलाउँदछौं।
अन्तिम स्पर्श कंघी लिनु हो र यसलाई निधारबाट पछाडि सिधा लाइनमा चिन्ह लगाउनुहोस्। थप थप बिना तपाई कपाल लाई यसको प्राकृतिक आकार लिन र एकै दिशामा राख्न सक्नुहुन्छ। केश शैली बदल्नबाट बच्न र यसलाई समाप्त गर्न अझ चिह्नित गर्नको लागि आफ्नो हातले यसलाई छुनु आवश्यक छैन, फिक्सिंग स्प्रे प्रयोग गर्न सकिन्छ ताकि परिणाम अझ नियन्त्रणमा सकियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » पुरुषहरूमा पछाडि कमेड गरियो
Ubersexual र metrosexual बीच भिन्नता: प्रत्येक के हो?